Wechitatu bato rakabatana ne "Celebgate" chinyadzo chinoonekwa | IPhone nhau
El Celebgate kakanga kari kekusanzwikwaKune avo venyu vanobatwa mune izvi zvishoma kunonoka, ngatirangarirei, angangoita makore matatu apfuura anoshandisa mushandisi akabata maemail enhamba yakanaka yevakakurumbira veHollywood, ndokuzovatumira email yepamoyo yekunyepedzera nechinangwa chekuwana. maoko avo pamusoro avo iCloud mavara echivande. Paakangove nazvo, akazvipira iye kuti awane ake emaraibhurari emifananidzo uye kuashambadzira painternet.
Nekudaro, zvinoita sekunge kesi haina kunyatso kuvharwa, makore matatu gare gare mushandisi mutsva akabatanidzwa neichi chinyadzo akaonekwa uye FBI iri kushanda pamwe neApple kuvhima tsotsi.
Kasiri kare chaizvo chinhu chimwe chete chakaitika zvakare, kudonha kwemifananidzo, uye mune iyi nyaya Emilio Herrera (mutadzi wekutanga Celebgate) uyo anotarisana nemakore mashanu mutirongo yemubatanidzwa muUnited States of America, zvinoita kunge asiri iye akapara mhosva. Ino ndipo FBI painodzika kuzoshanda nechinangwa chekujekesa kuti ndeipi chaiyo kubatana kune matsotsi maviri, kana paine. Zvese zvinoratidza kuti mutadzi anogona kuwanikwa muPennsylvania, asi ivo havana kupa rumwe ruzivo.
Iva zvazvingaite, muActualidad iPhone tinotora mukana wekukuyeuchidza kuti Apple haizombokukumbira iwe chero mhando yeruzivo rwakakanganiswa senge iCloud password yako, saka unofanirwa kutiza wakananga, bvisa iyo email kwete usati wawedzera iyo iyo SPAM runyorwa kuti uzvichengete iwe kuona kwako. Aya marudzi emaemail akabudirira zvakanyanya kupfuura zvatingafungidzire, saka hazvina kukosha chete kuti tizive kuti azvino sei pamberi pavo, asi zvakare nekuyeuchidza avo vasinga zive neano masystem kuti vangazvidzivirire sei. Aya ndiwo maitiro anoitwa ruzhinji rwemhosva dzerudzi urwu, chenjera kupa data rako neemail.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mumwe wechitatu akabatana ne "Celebgate" nyonganiso inowoneka